DAAWO: Madaxweyne Deni, Hadal jeedintiisi Baarlamaanka maxaa ka run ahaa?
Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Garoowe & qaar kamid ah xaafadaha magaalada oo caawa kala xirmay.
DAAWO: Puntland oo gobolka Sool ku soo bandhigtay ciidamo Somaliland ka soo goostay & saldhigyadoodii
Barlamaanka Puntland oo berri balansan iyo wararkii ugu dambeeyey ee mooshinka.
DAAWO-Culimada Buuhoodle oo dagaal ku dhawaaqay dalbadayna in la toogto dhammaan..
AKHRISO-Waare oo magacaabay 8 xubnood oo maamulaya doorashada heer federal.
DHEGAYSO: Bilaal Bulshaawi oo laga quraan saaray xarigii Hargaysa ayaa sheegay inuu ku laaban doono markuu u baahdo.
AKHRISO: Wasiir Goodax Barre oo farriin soo diray markii ugu horaysay tan iyo intii laga waayey wasiirada cusub.
Dhaqdhaqaaq ciidan oo saaka laga dareemayo jiidaha dagaalka & ciidamo xalay gudoodi ku galay
Lix nin oo ku eedaysnaa dilkii deegaanka Kala-baydh ee gobolka Sool oo xukumo kala duwan lagu ridey & beel go’aan ka dhan ah qaadatay.